Fanofanana tany Nosy Maurice : zahana ny aretina mpahazo ny biby an-dranomasina | NewsMada
Fanofanana tany Nosy Maurice : zahana ny aretina mpahazo ny biby an-dranomasina
Nanome fiofanana ho an’ireo mpikaroka harena anaty ranomasina aty amin’ny faritra ny COI sy ny Institut océanographique de Maurice (MOI), ny 16 hatramin’ny 20 oktobra 2017 teo, tany Nosy Maurice. Fiofanana niompana momba ny fikarohana ny aretina (taxonomiques) mpahazo ny biby an-dranomasina, toy ny sokatra. Anisan’ny nandray anjara tamin’izany ny avy eto Madagasikara.
Atao izay hahafantarana bebe kokoa hatrany ny momba io aretina io sy mamaritra azy mazava amin’ireo zavamananaina anaty ranomasina. Mpikaroka manampahaizana manokana avy any Aostralia nitondra izany fanofanana izany amin’ny lafiny teknika sy any amin’ny laboratoara. Taorian’ny fiofanana, nofaritana tao Nosy Maurice izay mahakasika rehetra momba ireo biby an-dranomasina ireo, namoahana torolalana mihitsy atao ho fantatry ny rehetra. Hanao toy izany koa ve ny eto Madagasikara ?
Izay voaangona rehetra hanampy ny firenena isanisany mpikambana ao amin’ny COI, hanaraha-maso ny fahasalaman’ireo biby an-dranomasina sy ny fiarovana azy. Loza mitatao ankehitriny ny fitrandrahana tafahoatra azy ireny, mampihena hatrany ny isany ; eo koa ny fahalotoan’ny tontolo iainana misy azy sy fiovan’ny toetr’andro, lasa mitarika aretina ho azy ireny.
Tokony hiara-miasa sy mifanakalo traikefa ny aty amin’ny faritra amin’io sehatra io, hanomezan-danja ireo harena voajanahary anaty ranomasina ireo. Endrika iray ho fampandrosoana ny « toekarena manga » aty amin’ny faritra izany.